December 2019 – SHARRTZ.ORG
Author Sharr Thet ZawPosted on December 6, 2019 Categories AR/VR, BIM, Knowledge, Technology and SocialTags BIM, Presentation Show, VRLeaveacomment on BIM + VR
Individualism လား? Collectivism လား?
တရက် Customer Behavior သင်နေရင်း customer တွေဟာ Individualism နဲ့ Collectivism ကွဲတာတွေ တီချယ်က ပြောနေတယ်။ ကိုယ့်အတွေးတွေက ဒီ Individualism နဲ့ Collectivism ဆိုတာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဝန်ထမ်းရေးရာ အပိုင်းရယ်နဲ့ ဒီနေ့ခေတ် လူငယ်တွေရဲ့ လမ်းကြောင်းသွေဖယ်မှုတွေကို ဆက်စပ်တွေးမိတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဒီpost လေး Share ပေးဖို့ အကြောင်းဖန်လာတယ်ဆိုပါတော့။ Individualism နဲ့ Collectivism ဆိုတာ လူတွေရဲ့ Personality ကွဲပြားမှုတွေပါ။ Individualists တွေဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း စွမ်းရည် ပိုင်ဆိုင်သူတွေပါ။ Case တစ်ခု Duty တစ်ခုအပေါ်မှာ Problem ရော Solution ရောကို ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်နဲ့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ဆန်းသစ်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ အရာရာကို တိုးတက်ပြောင်းလဲပေးဖို့ ဝန်မလေးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် Innovators, Entrepreneur အစရှိတဲ့ Self starter အများစုဟာ Individualism တွေဖြစ်ပါတယ်။ Collectivism ဆိုတာက အများနဲ့ ဝိုင်းဖွဲ့ အလုပ်လုပ်တက်သူတွေပါ။ တစ်ခုခု ပြောင်းလဲဖို့ ဆုံးုဖတ်ဖို့အတွက် အများသဘောတူညီချက်နဲ့မှ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သုံးနေကျ ပုံမှန်နည်းလမ်းကနေ သွေဖယ်ပြီး အသစ်အဆန်းတွေ ပြောင်းလဲဖို့ ဝန်လေးတက်ကြပါတယ်။ အလုပ်တစ်ခု တာဝန် တစ်ခုကို အသင်းအဖွဲ့နဲ့ ခွဲဝေဆုံးဖြတ် အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ Collectivism အများစုဟာ Team player, Team worker တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ Individualism ရော collectivism ရောဟာ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုအတွက် သူ့နေရာနဲ့သူ အရေးပါကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သူတို့တွေကို Personality အလိုက် နေရာထားတက်ဖို့က သာပြီး အရေးပါလှပါတယ်။ Collectivism တွေစုနေတဲ့ အုပ်စု တစ်စုကို Individualism တစ်ဦးက ဦးဆောင်မယ်ဆိုပါစို့ ကောင်းမွန် ညီညွတ်တဲ့ Team တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ Individualism တစ်ထို့ယောက်အက Collectivism နေရာမှာ အလုပ်တူလုပ်ပဲကိုင်လို့ အဆင်မပြေသလို Collectivism တစ်ယောက်ဟာ Individualism ရဲ့တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရင်လည်း ဒုက္ခနဲ့ လှလှနဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုဟာလည်း Individualism သဘောသက်ရောက်တဲ့ ကုမ္ပဏီ နဲ့ Collectivism သဘော သက်ရောက်တဲ့ ကုမ္ပဏီရယ်လို့ ကွာခြားမှုရှိပါတယ်။ အရှေ့တောင် အာရှ ကုမ္ပဏီအများစုဟာ Collectivism တွေဖြစ်ပြိး US အပါအဝင် အနောက်နိုင်ငံ ကုမ္ပဏီ အများစုဟာ Individualism ဖြစ်ကြပါတယ်။ လက်တွေ့အရဆို ကိုယ် ဂျပန် ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်တော့ နည်းပညာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး တစ်ချို့သော Ease & speed နည်းလမ်းတွေကို ကိုယ့်ရဲ့ Workmate တွေနဲ့ Sharing လုပ်ပြီး အသုံးပြုဖူးပါတယ်။ တချို့သော ပိုမိုအဆင်ပြေစေမယ့် နည်းလမ်း အသစ်တွေကို Supervisor ကို Upgrade လုပ်ဖို့ တင်ပြဖူးပါတယ်။ Supervisor ကလည်း အဆင်ပြေ ညီညွတ်ကြောင်း လက်ခံခဲ့ပေမယ့် Setting မချနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အကြောင်းပြချက်ကတော့ အိုမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ တဖတ်နိုင်ငံက ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲတွေဟာ နည်းလမ်းအသစ်တွေကို သင်ယူဖို့ရာ အဆင်မပြေလှတာကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံရဲ့ ကုမ္ပဏီတော်တော်များများဖြစ်နေတက်တဲ့ သတိမထားမိတဲ့အလေ့အကျင့်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခု ပုံမှန်ကောင်းမွန်စွာလည်ပါတ်နိုင်ဖို့ Collectivism အမြောက်အမြား လိုအပ်သလို စျေးကွက်ထဲ သူများထက်သာလွန်စွာထိုးဖောက်နိုင်ဖို့ Individualism တွေဟာလည်း အရမ်းကို အရေးပါလှပါတယ်။ ဒီအချက်က လက်ရှိ တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီ အများစု သတိပြုသင့်တဲ့အချက်ပါ။ နောက်တစ်ချက်က လုပ်ငန်းခွင် ဝင်တော့မယ့် လူငယ်တွေ လက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေသူတွေနဲ့ ၁၀တန်းပြီးလို့ တက္ကသိုလ်ကူးပြောင်း လူငယ်တွေအတွက်လည်း မိမိကိုယ်မိမိ Individualism လား Collectivism လား ခွဲခြားသိမြင်တက်ဖို့လိုပါတယ်။ နေရာလွဲနေလို​့ လုပ်ငန်းခွင် အဆင်မပြေတာ ကြောင့် အလုပ်ထွက်တာတွေ ဝင်တာတွေ များနေတက်ပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ဝန်ထမ်းခန့်အပ်ရေးမှ သက်ဆိုင်သူတွေရဲ့ အရည်အချင်းပါပဲ။ သူတို့တွေဟာ ဝန်ထမ်းရဲ့ စွမ်းရည်ကို သေချာလေ့လာသုံးသပ်ပြီး နေရာချထားတက်ဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ နေရာလွဲမှားမှုတွေကြောင့် ရေရှည်အလုပ်မလုပ်နိုင်ကြတဲ့အချက်က အဓိကအချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပါဝင်နေပါတယ်။ တဖက်ကပြောရပြန်ရင်လည်း Individualism လား Collectivism လား မရေရာပဲ Leadership သင်တန်းမှာ ပြုံနေကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းများပါတယ်။ Individualism ရော collectivism ရောဟာ သူ့နေရာနဲ့သူ အရေးပါလှတဲ့ Personality တွေချည်းပါပဲ။ ဒီလောက်ဆို Future career ရော Growth အတွက်ရော စဉ်းစားစရာ အချက်တစ်ချက်တော့ရမယ်ထင်ပါတယ်။
Sharr Thet Zaw
Author Sharr Thet ZawPosted on December 6, 2019 Categories Knowledge, Knowledge and TrainingLeaveacomment on Individualism လား? Collectivism လား?
Myoe Pya.apk (Version 1.04)
MyoePya Application (Versión 1.04) မှာ ဘာတွေပါလာပြီလဲ🤩🤩🤩🤩
ဒီမှာ Upgrade လုပ်ထားတာလေးတွေ နည်းနည်းများပါတယ်။
အဓိကအနေနဲ့ Displine တွေကို Model တစ်ခုတည်းကနေ ကြည့်လို့ရအောင် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
နောက်ပြီး အဓိက Function တွေဖြစ်တဲ့
Scale တွေကို မိမိလက်ချောင်းလေးများသုံးပြီး အလွယ်တကူ ပြုလုပ်လာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Version 1.04 ရဲ့ Special function တစ်ခုက Light sensation ပါထည့်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်ဘက်က မီးအလင်းအမှောင်ကို အာရုံခံပြီး model ကိုလည်း သဘာဝကျအောင် ထိန်းညှိပေးတဲ့အတွက် သီးသန့် ကွဲထွက်နေတာမျုးမဟုတ်ပဲ မြင်နေရမှာပါ။
Realistic ပိုဆန်အောင် Shadow effect ကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါသေးတယ်။
ပိုမိုအသုံးပြုလွယ်ကူစေဖို့အတွက် ခလုပ်တွေကို Screen မှာ ရှုပ်မနေစေတော့ပဲ model နဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးထားပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ခေတ်မှီ ဆန်းသစ်တဲ့ မြင်ကွင်းလေးကို မြင်ရမှာပါ။
Pointer လေးနဲ့ User Interface ကိုလည်း အသုံးပြုရပိုမိုလွယ်ကူစေဖို့ Update လုပ်ထားပါသေးတယ်။
3D model တွေအနေနဲ့ Revit ပဲ သုံးလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး 3D Max, sketchUP, tekla, Maya, Cinema4D, အစရှိသော 3D application တွေနဲ့ ရေးဆွဲထားတဲ့ Model တွေပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နော်
ယူနီကုတ်နဲ့ ကြိုးစားပန်းစားရေးထားတာမို့လို့ ကျန်တဲ့ Function လေးတွေ ရှိရင်လည်း Edit နဲ့ ထပ်ဖြည့်ပေးမယ်နော်။
Version 1.05 မှာ ဘာတွေ ပါလာဦးမလည်းစောင်ဘ့်တွေကြည်ည့်ရ့်င်ရင်း ပိုအဆင်ပြေမယ့် အကြံဉာဏ်လေးတွေလည်း ဝေဖန်ပြောကြားလို့ရပါတယ်ရှင့် 😘
Author Sharr Thet ZawPosted on December 6, 2019 Categories AR/VR, Software, Technology and SocialLeaveacomment on Myoe Pya.apk (Version 1.04)
Myoe Pya.apk (Version 1.03)
MyoePya.apk (Version 1.03)
♦️Say No to Scale Model♦️
Upgrade ထပ္လုပ္ထားတဲ့ ဒီ Version 1.03 မွာ ပါဝင္လာတဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးေတြေျပာျပပါမယ္။
ဒီ Version ေလးမွာ မိမိရဲ႕ 3D model ကို ၾကည့္ေနရံုမဟုတ္ေတာ့ပဲ ေရြ႕လ်ားမႈ Function ေတြျဖစ္တဲ့
Scale ေတြကို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာက္လာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
ထို Function ေတြအတြက္ ဖုန္းရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္မွာရွိတဲ့ မိမိရဲ႕ 3D model ကို လက္နဲ႔ထိေတြ႕ၿပီး ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
3D model ကို ပါဝင္တဲ့ အပိုင္းလိုက္ ခြဲျခားၿပီး ေခၚေဆာင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
အဲ့လုပ္ေဆာင္နည္းကေတာ့ ပထမဆံုး 3D model စတင္ေပၚေပါက္လာၿပီဆို မ်က္ႏွာျပင္မွာ ယခု Model အတြက္ Architecture, Structure, Superstructure, Substructure နဲ႔ All ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးအစားထဲက တစ္ခုခုကို ေရြးၿပီး 3D model ကို ေခၚေပးယံုပါပဲ။
မိမိတို႔ရဲ႕ Design Concept နဲ႔ 3D Modeling လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အလြယ္တကူ အေျဖရွာ ထုတ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
3D model ရပ္တည္ႏိုင္မည့္ Ground Plane မွ မ်ဥ္းေတြကိုလည္း ေသးငယ္တဲ့ အျဖဴေရာင္ေတြအျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးထားၿပီး Quality ျမင့္တင္ေပးထားပါတယ္။
Version 1.03 ရဲ႕ Upgrading ေလးေတြျဖစ္ပါတယ္။
Version 1.04 မွာလည္း ထပ္မံ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းတဲ့ Function ေလးေတြနဲ႔ Upgrading ေလးေတြ ထပ္လာဦးမွာမို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေပးပါဦးေနာ္။
မိမိတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအျမင္ အၾကံျပဳလိုတာမ်ားရွိရင္ အၾကံျပဳလို႔ရပါတယ္။
Author Sharr Thet ZawPosted on December 6, 2019 Categories AR/VR, Software, Technology and SocialLeaveacomment on Myoe Pya.apk (Version 1.03)
Myoe Pya.apk (Version 1.0)
ၿမိဳ႕ျပ application ရဲ႕ ပထမဆံုး အၾကမ္း ထုတ္ထားတဲ့ Version 1 ျဖစ္ပါတယ္။
The next logical move of BIM is AR ဆိုသလိုပါပဲ AR ကိုအေျခခံေရးဆြဲထားတဲ့ application ေလးျဖစ္ပါတယ္။
BIM နဲ႔ AR ကိုတြဲရက္အေနနဲ႔ မ်ားေသာအားျဖင့္ Drawing စာရြက္ေပၚအေျခခံ ပံုေပၚေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ နည္းလည္းရွိပါတယ္။
သွ်ားကေတာ့ Model ကို ပိုၿပီး Stable က်က်ေပၚေစဖို႔ Direction based သံုးၿပီး Model ေခၚျပထားပါတယ္။
3D model ေလးက Hledan Center ပံုစံတူ Model ေလးကို သွ်ားက Revit နဲ႔ Develop လုပ္ထားတာပါ။
Develop လုပ္ထားတဲ့ BIM 3D model ေလးကို application inventory ထဲထည့္ျပထားပါတယ္။
ပထမဆံုးထုတ္ထားတဲ့အၾကမ္းထည္ေလးျဖစ္လို႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိပါေသးတယ္။ ယခု Version 1 ေလးမွာက 3D AR model ေလးကို presentation ျပလိုသူေတြ အဆင္ေျပမယ့္ Model ေခၚယူျပသျခင္းပဲ ထည့္ထားပါတယ္။
Version 1.04 ေတြမွာ ထပ္ထည့္ထားတဲ့ Function ေလးေတြရွိပါတယ္။
အဲ့ေတာ့ ယခု Version 1 မွသည္ Version 1.09,1.04 ေတြအထိ ဘာေတြပါလာဦးမလဲဆိုတဲ့ Developing vídeo ေလးေတြ ဆက္တင္ေပးသြားပါဦးမယ္ေနာ္။
Author Sharr Thet ZawPosted on December 6, 2019 Categories AR/VR, Software, Technology and SocialLeaveacomment on Myoe Pya.apk (Version 1.0)
SHARRtz second AR app
It’s SHARRtz second AR app.
အျပင္က ဓါတ္ပံုေလးေတြကို Scan ခ်င္ရင္ ဖုန္းထဲမွာေတာ့ Scan ခ်င္တဲ့ ပံုေလးရွိေနရပါမယ္။
1.Scan ခ်င္တဲ့ ပံုေလးကိုေရြး
2.ေပၚလာေစခ်င္တဲ့ video ေလးကိုေရြး
ၿပီးရင္ အျပင္ပံုေလးကို Scan လိုက္လို႔ရပါၿပီ။
အေပ်ာ္တန္းေရးဆြဲထားတဲ့ App ေလးမို႔လို႔ ေဆာ့ခ်င္တဲ့သူေတြရွိရင္ PlayStore ကေနျဖစ္ျဖစ္ အျပငိ link တစ္ခုကေနျဖစ္ျဖစ္ Free download လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ထပ္တင္ေပးပါမယ္။
Author Sharr Thet ZawPosted on December 5, 2019 Categories AR/VR, Software, Technology and SocialLeaveacomment on SHARRtz second AR app
Myoe Pya application
သွ်ားတို႔ Design သမားေတြ ခဲတံေခတ္က T-Ruler, Triangle ေတြနဲ႔ သံုးၿပီး ပံုဆြဲ ဒီဇိုင္းေတြေဖာ္ျပၾကတယ္။
ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ Computer software အမ်ားအျပားေပၚလာၿပီး 3D Design ေတြနဲ႔ ပံုေတြထုတ္ျပၾကတယ္။
ပိုမိုတက္ေျမာက္သူေတြကေတာ့ Animation ေတြ သံုးၿပီး Design ကိုေဖာ္ျပၾကတယ္။
အနည္းဆံုးေတာ့ ခဲတံေခတ္ထက္ ပိုၾကည့္ေကာင္းလာသလို Client ေတြကလည္း သေဘာက် ႏွစ္သက္ၾကတယ္။
ဒီလိုတိုးတက္ေနတဲ့ 3D design system ဟာ ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ BIM (Building Information Modeling) လို႔ေခၚတဲ့ 3D model ကို ပိုမိုတိက်တဲ့ Information ေတြထည့္သံုးလာၾကတယ္။ Client သေဘာက်မႈေရာ လက္ေတြ႕အသံုးဝင္မႈေတြေၾကာင့္ ထိုTechique ဟာ ႏိုင္ငံတကာမွာ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးခ်ေနသလို သွ်ားတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာပါ တစ္စ တစ္စ စိတ္ဝင္စားလာေနၾကပါၿပီ။
တိုးတက္တဲ့နည္းပညာေတြ စိတ္ဝင္စားသူေတြအဖို႔ The Next logical move of BIM ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာေပၚ အေျခခံထားတဲ့ application ေလးတစ္ခုအေၾကာင္း ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
3D ကို အေျခခံသူေတြျဖစ္တဲ့ Architect, Designer, Consultant ေတြ အမ်ားအျပားအတြက္ အသံုးဝင္မယ္ထင္ပါတယ္။
Application ေလးအေၾကာင္းကေတာ့ version video ေလးေတြမွာ ဆက္လက္ရွင္းျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
Author Sharr Thet ZawPosted on December 5, 2019 Categories AR/VR, Software, Technology and SocialLeaveacomment on Myoe Pya application